EAS RF Security Scanner Gate door Door Alumium Alloy Antenna-A209
Ihe kachasị RF EAS Sistem bụ sistemụ na - arụ ọrụ na 8.2 MHz. Dị ka Mono ma ọ bụ Dual System, sistemụ abụọ ahụ nwere otu ụdị profaịlụ dị elu jikọtara ya na mma. imaatu, ulo ahia akwa, ulo ahia, ebe ogwu na ihe ndi ozo.
Nọmba nlereanya: A209
:Dị: EAS RF sistemụ
Dimension: 1660 * 420 * 42MM
Agba: Aluminom Alloy
EAS Sistemụ RF EAS 8.2mhz RF Security Supermarket Door Antenna-PG308
Mejupụtara usoro sistemụ RF, ụzọ kacha mkpa iji rụọ ọrụ elekọtị dijitalụ, bụ ngwaahịa bara uru. Na ụdị acrylic RF a nwere ike dakọtara na bọọdụ PC PCB RF dị iche. Karịsịa, agbakwunyere Red Agba Ikanam si - nke nwere ike ịtọ ka ọ ga-adịgide adịgide ma ọ bụ naanị mgbe antenna ahụ dara ụda- zuru oke maka ndị na-ere ahịa chọrọ oke ime mmụọ na-enweghị ịchụ àjà arụmọrụ. Ọ bụ poolu RF anyị kachasị ewu ewu. Ntinye ya dị mfe, kensinammuo, arụmọrụ nchọpụta dị elu, nkwụsi ike dị mma, njirimara ọdịda ọdịda dị ala na-eme ka ọ dabara nke ọma n'ọtụtụ gburugburu.
Nọmba nlereanya: PG308
Dimension: 1518 * 280 * 20MM
EAS Retail Store 58khz AM Ulo olu Shop mkpu Anti-ezu ohi Aystem Gate-PG400
Emepụtara AM zuru ezu, dị ike AM nke e mere na mgbado na nchọpụta siri ike nke akara mmado, ntụkwasị obi, na mgbanwe. Usoro AM a nke a na-adabara maka gburugburu ebe obibi ọ bụla, yana arụmọrụ nke na-ebute n'elu ahịa nchekwa ahịa.
Usoro AM dị elu n'ọnụ ụzọ ma ọ bụ buru ibu ebe ọ na-egosi ọtụtụ ndị na-asọmpi ya, yana ya na usoro ABS nke oge a na-adịgide adịgide ma na-adọrọ adọrọ nke ọma, yana ohere maka ọkọlọtọ mgbasa ozi.
Nọmba nlereanya: PT309
Dimension: 1560 * 420 * 20MM
EAS Retail Store 58khz AM Ulo olu Shop mkpu Anti-ezu ohi Aystem Gate-PT309
Usoro AM a na-arụ ọrụ na ụkpụrụ na transmitter na-ezipụ mgbaàmà na mgbawa nke na-eme ka mkpado dị ike n'ime mpaghara ụkwụ. Mgbe usu ahụ kwụsịrị, mkpado ahụ na-aza. N’agbata mgbawa, onye na-anabata ihe na-ahụ ihe mgbaàmà mkpado ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na mkpado na-arụ ọrụ gafere n'etiti ntọala ahụ, mkpu ga-ada ụda.
EAS usoro AM Sistemụ Acrylic Ogologo ogo dị mfe 58KHz Uwe Nchekwa Uwe Nche-PG300
A na-akpado ihe ma ọ bụ kpọọ ya aha na otu antenna ma ọ bụ karịa, nke na-adịkarị n'akụkụ oghere ụlọ ahịa, na-agwa ha okwu mgbe ha batara, na-eme ka njikwa ụlọ ahịa mara mgbe mmadụ na-anwa iwepu ihe n'ụlọ ahịa na-enweghị nhazi kwesịrị ekwesị.
Nọmba nlereanya: PG300
Dimension: 1500 * 306 * 20MM
EAS Antenna Clothing Store Security System Anti-ezu ohi mkpu nke AM 58khz EAS Antenna-PG200
Usoro nyocha a na-egosipụta Etagtron AM EAS teknụzụ maka ọkwa kachasị elu nke izu ohi na mkpuchi 2.5m (8ft 2in) maka ọpụpụ sara mbara ma ọ bụ ọtụtụ .Ọdịrịrị warara, warara, oghere mepere emepe bụ nke ejiri acrylic dị elu, na-echekwa ụlọ ahịa. aesthetics na ịnapụta nri anya maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkpọsa ahịa.
Nọmba nlereanya: PG200
Dimension: 1500 * 200 * 20MM
Agba: isi awọ / ọcha